people Nepal » कसरी मत हाल्ने ? यस्तो छ भोट हाल्ने तरिका कसरी मत हाल्ने ? यस्तो छ भोट हाल्ने तरिका – people Nepal
कसरी मत हाल्ने ? यस्तो छ भोट हाल्ने तरिका
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्न अब ९ दिनमात्र बाँकी छ । तर, धेरै मतदातालाई अझैसम्म कसरी मतदान गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।
अघिल्ला निर्वाचनहरुमा आफुलाई मत पर्ने वा रुचाएको निर्वाचन चिन्हमा एक ठाउँमा मात्र मत दिएका मतदाता यसपटक भने कसरी मत दिने भन्ने अन्योलमा देखिएका छन् । एउटा उम्मेदवारले एकै पटक ७ जना प्रतिनिधी छनौट गर्न सक्ने भएकाले मतदाता बढी अन्यौलमा देखिएका हुन् ।
कसरी दिने त मत ?
निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने ? अनलाइखबरले मतदाताहरुलाई सजिलो होस भनेर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई सोधेर मतदानको तरिकाबारे जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । मतदाताको मत सदुपयोग होस र बदर नहोस भन्नेमा निर्वाचन आयोगमात्र होइन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि मतदानको तरिका सिकाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
पहिला लाइनमा बस्नुस्
मतदानको दिन हरेक मतदाता मतदाता परिचय पत्र सहित आफ्नो परिचय पत्रमा उल्लेख भएको मतदान केन्द्रमा गएर लाइनमा बस्नुपर्छ । लाइनमा बस्नुअघि आफ्नो मतदाता परिचय पत्रको क्रम संख्या थाहा पाएको हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले उसलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ । मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट पाउनेछन् ।
यसरी दिनुपर्छ मत
निर्वाचन प्रतिनिधीहरुले तपाइको मतदाता परिचय पत्रका आधारमा निर्वाचन केन्द्रभित्र प्रवेशको अनुमति दिन्छ । त्यहाँ पुगेर तपाइले एउटा मतपत्र पाउनु हुनेछ । उक्त मतपत्रमा अब तपाइले कुन चिन्हमा मतदान गर्न चाहेको हो, त्यस्तो चिन्हमा मत संकेत गर्नु पर्नेछ ।
मतपत्रमा तेस्रो साइनमा हरेक दलको सातवटा मत चिन्ह राखिएको हुन्छ । तपाइले कुनै एउटा दललाई एक नम्बरको चिन्हमा मत दिनुभयो भने त्यो मत उक्त गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखले पाउनेछ ।
दोस्रो ठाडो लाइनमध्ये कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा मत दिनुपर्छ । त्यो मतचिन्ह सम्वन्धित दलको उपमेयर वा उपप्रमुखलाई मत दिएको हुन्छ । यस्तै तेस्रो ठाडो लाइनमा कुनै एउटामा मात्र मत दिँदा वडा अध्यक्षले मत पाउने छ । त्यसपछि क्रमश महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, र दुइ खुल्ला सदस्यलाई मत दिनुपर्नेछ ।
मतपत्र पट्याउँदा पनि होसियारी
एउटा ठाडो लाइनमा एक जनाका दरले ७ वटा ठाडो लाइनमा मत दिएपछि मतदान प्रक्रिया सकिन्छ । त्यसपछि मतदाताले मतपत्रलाई विस्तारै पट्याएर मतपेटिकामा हाल्नुपर्छ । तर, मतपत्र पट्याउने क्रममा मतसंकेत गरेको स्वस्तीक छापको मसी यदि सुक्न भ्याएको छैन भने अर्को ठाउँमा गएर लत्पतिन सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा तपाईले दिएको मत बदर हुनेछ । त्यसैले मतपत्र पट्याउँदा मतसंकेत गर्दा लगाएको स्वस्तिक छाप सुकिसकेको हुनुपर्नेछ । गोप्य मतदान भएकाले मतदाताले कसलाई मत दियो भनेर कसैले हेर्न पाउँदैन ।
तर, दृष्टिविहीन र अशक्त तथा वृद्धवृद्धाको हकमा उनीहहरुले इच्छाएको व्यक्ति वा मतदान अधिकृतले मतदाताले भनेको चिन्हमा मत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।